Lozam-pifamoivoizana :: Namono olona indray ny lalambaovaon’i Tsarasaotra • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Namono olona indray ny lalambaovaon’i Tsarasaotra
Namoizana ain’olona iray indray ny lalam-baovao mam-pitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato, tamin’ny sabotsy maraina lasa teo. Tra-doza ny fiara tsy mataho-dalana nivarina tany amin’ny tatatra. Namoy ny ainy ny mpandeha iray. Naratra ny mpamily saingy tsy misy hatahorana ny ainy. Ratra madinika kosa no hita tamin’ireo mpandeha roa hafa.
“Avy any Ivato nikasa hihazo ny renivohitra ilay fiara tsy mataho-dalana. Tsy fantatra izay zava-nisy fa tampoka tsy voatana ny familiana ka lasa tany anaty tatatra. Ahiana ho nandeha mafy rahateo izy io. Vokany, nivadibadika ny fiara ka nipitika hatramin’ ny kodiarany. Mbola nifamonjena nentina tany amin’ny hopitaly ny mpandeha iray naratra mafy. Tsy tana anefa ny ainy minitra vitsy taorian’ izay”, hoy ny loharanombaovao avy amin’ny mpitandro filaminana.
Matetika hitrangan’ny loza ny lalam-baovao eny Tsarasaotra, tato anatin’ny volana vitsy izay. Sodokan’ny hatsaran’ny lalana ny mpamily ka voasarika amin’ny hafainganam-pandeha haingana. Mitarika famoizana ain’olona hatrany anefa ny loza mitranga eny antoerana, araka ny fitantaran’ny mponina eny amin’ny manodidina.
Famotsiana omby sy kolikoly :: Manao bemidina ireo lehiben’ny zandary
Tranga hafahafa :: Namoy ny ainy ity tovolahy nahafaty biby